२५ बर्षिय नितु आफ्नै आमा बुवाको अघि आएर उभिदा बे’होस भै ढले, घ’टना भयो अचम्मैको ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/२५ बर्षिय नितु आफ्नै आमा बुवाको अघि आएर उभिदा बे’होस भै ढले, घ’टना भयो अचम्मैको !
घ’टना यस्तो थियो केहि दिन अघि नीतू आफ्नो घर देखी हराईन् । परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिए । प्रहरीले नीताको श्रीमान् राम लखनमाथि शं’का गर्‍यो । पछि प्रहरीले राम लखनलाई दो’षी पाएन । नीतूको परिवारलाई एउटा मृ*त शरीर देखाए जुन नोयडाको सेक्टर ११५ मा भेटेका थिए जस्को शरीर पुरै ड’ढेको थियो । परिवारलाई उक्त शरीर नीतूको जस्तोलागेको थियो । प्रहरीले डिएनए स्याम्पल नजाँची सहजै सो श व दिएको थियो । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
५ सय किलो सुनबाट बनेको लक्ष्मी मन्दिरको महिमा